Nzvimbo Yekwakabva:Jiangsu, China
Product name:FFP2 Particle inopeta Kusefa Hafu mask
Basa:kudzivirira flu / anti somke / guruva
Certification:ISO / SGS / CNAS / CE
Mutsara:Pasina Exhalation Valve
Packing:1pc / purasitiki bhegi, 25 pcs / bhokisi, 40 mabhokisi / ctn kana sezvinodiwa nevatengi
Packaging Details:25 pcs / bhokisi , 1000 pcs / katoni
KS-9008 Standard CE FFP2 NR (Ine Exhalation Valve)
Mutsara:Ne Exhalation Valve
Packing:1pc / purasitiki bhegi, 20 pcs / bhokisi, 40 mabhokisi / ctn kana sezvinodiwa nevatengi
Packaging Details:20 pcs / bhokisi , 800 pcs / katoni
1. Yakanyanya kunaka dhizaini dhizaini uye yakawanda-layer kuchengetedzwa kwezvinhu, izvo zvinogona kusefa zvimedu zvinobudirira uye kumutsa kunhuhwirira kwakasiyana, huruva, mabhakitiriya uye mavhairasi.
2. Multi-layer reinforced filtration, inosvikika ganda-inoshamwaridzika layer, yekunze isina-yakarukwa jira, meltblown layer, uye sefa layer.
3.3D matatu-dimensional yekucheka inogona kugadzirisa kuenderana nechiso, kuvandudza maitiro ekudzivirira, seamless flattening, particle-free ultrasonic edge sealing, exquisite welding, yakakwira elastic elastic bhendi, dhizaini yemuviri wakafara hairwadzi ganda, nguva refu haina. yakasimba, uye inopfeka zvakanyanya Comfortable.
4. Electrostatic adsorption interlayer inogona kudsorb particulate matter, uye mamwe matinji ekusefa anobudirira ne layer anodzivirira hutano hwekufema.
KN95 GB2626-2006,GB2626-2019 (NeExhalation Valve)
Inoshanda zvakanyanya kurwisa ma aerosols asina mafuta. Iyi respirator inobatsira kudzivirira kune zvimwe
particulate zvinosvibisa asi hazvibvisi kuratidzwa kana njodzi yekubatwa nechirwere kana
utachiona. Kusashandisa zvisizvo kunogona kukonzera kurwara kana kufa.
Aya Masiki ekusefa Anoshanda ndeaya:
Hypoallergenic / Yakakwirira kusefa Kugona
Bvisa Zvimedu Zvakamiswa
Dust Pollen Dziviriro
KN95 GB2626-2006,GB2626-2019 (Yakaiswa Musoro)
· Zita reChigadzirwa: KN95 Disposable Particulate Respirator
· Mucherechedzo: YIRENTANG
· Muenzaniso: KN95
· Kupfeka Maitiro: Headband
· Ruvara: Muchena
· Zvinhu: Polyester, Electric Static Meltblown
· Nevhavha: NEKANA KANA PASINA
· Standard: GB2626-2006,GB2626-2019
3 Ply Disposable Dziviriro Mask
Mask iyi isiri yekudzivirira yekurapa inobatsira kusefa inokwana 95% yehutachiona uye hutachiona. Special 3 ply non-woven design inopa dziviriro kubva kuguruva uye PM 2.5, motokari inopera, pollen, bateria, droplet, etc. Yakapfava, yakasununguka, isina kunhuwa, yakakodzera kune ganda rakaoma, kureruka, nyore kufema. Non Medical 3ply Disposable Protective Mask Type: inoraswa mask Pateni: 3-ply nzeve loop Muvara: yebhuruu / pink / chena Chitupa: CE chitupa Mamiriro: Iyi isiri yekurapa 3-ply mask inobatsira kusefa kunze zvishoma 95% yehutachiona uye hutachiona. Zvinhu zvinofema, izvo zvinoita kuti zvive zvakakosha uye fashoni. Special 3 ply non-woven design inopa dziviriro kubva kuguruva uye PM 2.5, motokari inopera, pollen, utachiona, mabhakitiriya, droplet, etc. Yakagadzirwa nemamiriro ezvinhu ane ushamwari, hunyoro-uchapupu, husina chepfu, husingatsamwisi, hunyoro uye hwakanaka. Yakakwana kune zvekurapa, salon yezvipikiri kana chero imwe nzvimbo ingangodiwa dziviriro, senge chipatara, ndege, nezvimwe. Iyo 3 ply isiri-yakarukwa mask yekuvhiya inoraswa yakagadzirwa ne3 ply isiri yakarukwa zvinhu, ine hutano uye yakachengeteka kwauri. kushandisa. Yakakwana dhizaini, kana iwe ukaipfeka, inokodzera seamless mumeso ako. Elastic ear loop iri nyore kupfeka uye haina kudzvanywa munzeve. Matanho matatu ekuchenesa huruva, magasi ane muchetura mumhepo, uye ganda-rinoshamwaridzana sefa jira, rinokupa dziviriro yakawanda, inodzivirira kubva kuguruva, allergenic uye zvinosvibisa.
Kumeso kwemasiki KS-9005
1.Direct mugadziri kuti avimbise mutengo unonzwisisika uye hutano hwakanaka
2.5 ply dhizaini yekubudirira kudzivirira huruva uye mabhakitiriya
3.Packing 25pcs / bhokisi, 1000pcs / katoni, uyewo anogona kuva nomumwe vatengi'
4.Certificates ISO/CE/SGS/CNAS etc hama zvitupa & bvunzo mishumo.
Kumeso kwemasiki KS-9008
3.Packing 20pcs / bhokisi, 800pcs / katoni, uyewo anogona kuva nomumwe vatengi zvinodiwa
Kumeso kwemasiki KN95
Iyo KN95 particulate respirator yakagadzirirwa kubatsira kupa dziviriro kubva kune isiri-oiri-based particles, kubva mukukuya, jecha, kusaha, kana kumwe kuvhiyiwa kweguruva. Zvinogonawo kubatsira kuderedza kufemerwa kune zvimwe zvipenyu zvinofambiswa nemhepo.
Face mask KN95 ine vharafu
GB2626-2006,GB2626-2019 KN95 INE VALVE
Zita reChigadzirwa: PM2.5 matatu dimensional chena bhodhi inodzivirira mask
Chigadzirwa chirevo: 10.5 × 16cm
Kuumbwa kwemucheka: electrostatic yakanyunguduka yakafemerwa jira + yepamusoro-mhando isina-yakarukwa jira, mhino clip inogona kuvakwa-mukati, kunze, vharafu yekufema, bhandi renzeve rakasununguka.
Craft style: ergonomic dhizaini, ultrasonic kupisa chisimbiso
Regular Decor: chena, customizable
Mabasa makuru: kudzivirira guruva, haze, PM2.5, pollen
Face mask KN95 musoro-wakaiswa
GB2626-2006,GB2626-2019 KN95 MUSORO-WAKATADZWA
1.Dhonza elastic yepamusoro pamusoro pemusoro, kumusoro kwepamusoro.
2.Isa mask kumeso, ita mhino inonamatira mhino,
Iyo mask iri pazasi inovhara chirebvu.
3.Elastic pazasi pamusoro pemusoro mumutsipa pazasi nzeve.
4.Shandisa maoko maviri kuti ugadzirise chimiro chemhino clip, kuve nechokwadi chakavharwa.
5.Shandisa maoko kuvhara mask wofema; kunzwa kubuda kwemhepo kubva mumhino,
simbisa clip yemhino. Kana uchinzwa kubuda kwemhepo kubva kumapendero, ndapota gadzirisa elastic.
Zvekare, kuve nechokwadi chakanamwa.
Kunshan Gubang Protective Equipment Technology Co., LtdKero: Building 13, No.169 Shimeng Road, Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu, China